China Model No: Chinese Manufacture Automatic Control SPJ Series metal shredder machine ifektri nabaphakeli | Hlanganisa phezulu
Umshini wokushibilika wensimbi ungumshini osebenza ngezinto eziningi, oguquguqukayo, ukusetshenziswa komklamo ojwayelekile wemodyuli, ukushintshwa kwezingxenye kuhle, ummese osizayo wokwamukela i-die Forging ecolisisiwe. Inhloso eyinhloko yomshini wokushibilika wensimbi ukugunda nokukhipha impahla enkulu yensimbi kanye nobubanzi obukhulu bensimbi yesigubhu engakwazi ukuthuthwa, futhi isihlikihle ibe yishidi elidingekayo ukuze kwandiswe ukuminyana kwayo kokunqwabelana ukuze kube lula ukuhamba nokugaywa kabusha. Ukubukeka okuhle, isakhiwo esihle, esinembile futhi esihlangene. Ukubonakala komshini omkhulu wokushibilika wensimbi akugcini nje ukuthuthukisa amandla okukhiqiza nokusebenza kahle kokuchotshozwa, kodwa futhi kwandisa ububanzi bokusebenza.
Umshini wokushibilika wensimbi usetshenziselwa ikakhulukazi ukuchoboza izinsimbi ezilahliwe, ukwandisa ukuminyana kwawo ngobuningi ukuze kube lula ukuthuthwa, ukugaywa kabusha. Umshini wokushibilika wensimbi usetshenziswa kakhulu ekuhlinzeni ibhakede likapende, ibhakede likadizili, ishidi lensimbi elincanyana, igobolondo lemoto, insimbi yokucindezela insimbi, izinsalela zensimbi yeshidi nezinye izinto zensimbi ezilahliwe. I-Metal shredder blade yenziwe ngensimbi enamandla amakhulu e-alloy, enokumelana okuqinile nokugqokwa namandla aphezulu ...
●Ummese onyakazayo owugqinsi, ukusebenza kahle kokuchotshozwa okuphezulu, amathuluzi enziwe ngensimbi ye-alloy casting, eqinile nempilo ende yesevisi.
● Ukujiya kwepuleti lozimele, kungamelana netorque ephezulu, kuqine kakhulu.
●I-Microcomputer (PLC) yokulawula okuzenzakalelayo, setha isiqalo, misa, hlehlisa futhi ulayishe kakhulu imisebenzi yokulawula ukuhlehla okuzenzakalelayo.
● Umshini wethu wokushibilika wensimbi unezici zejubane eliphansi, i-torque enkulu, umsindo ophansi, uthuli lungafinyelela izinga lokuvikelwa kwemvelo.
● Kulula ukulungisa, izindleko eziphansi zokunakekela, ukonga futhi zihlala isikhathi eside.
●Ubukhulu bethuluzi kanye nenani lezinzipho zommese kungashintshwa ngokuya ngezinto ezahlukene
Isimiso sokusebenza somshini wokushibilika wensimbi:
Izinto ezibonakalayo ngohlelo lokuphakela emshinini wokuhlikihla ngaphakathi kwebhokisi, ibhokisi lomshini wokushibilika wensimbi elinensingo yokusika, impahla ngemuva kokudabula i-blade, i-extrusion, i-shear nezinye izenzo ezibanzi, ihlukaniswe yaba izingcezu ezincane zempahla ukuhlangabezana nezidingo, kusukela phansi. ingxenye yebhokisi. Ukuvela komshini wokushibilika kwensimbi akuxazululi kuphela indawo enkulu yokunqwabelana kwezinto ngokucubungula umshini wokushibilika wensimbi kulula futhi ukuthutha nokugaywa kabusha. Kuyo yonke inqubo, okubaluleke kakhulu yikhanda lokusika kanye nemoto, umshini wokusika insimbi wokudabula izinto zensimbi, ubulukhuni bekhanda lokusika, izidingo zokumelana nokugqoka ziphakeme kakhulu, uma zingekho ezidingweni zizoholela ekulimaleni komshini wokushibilika kwensimbi.
Umshini wethu wokushibilika wensimbi unokulawula okuzenzakalelayo, kulula kakhulu ukusebenza, ukugcinwa okulula.
1.I-Metal Shredder blade yomshini
Singakwenzela ngokwezifiso i-metal shredder blade mayelana nezinto ezingavuthiwe zalo mshini wokushibilika wensimbi.
3. Zonke-in-one umshini
Umshini wethu omncane wokushibilika wensimbi owodwa unomklamo okhethekile, uhlanganisa indawo encane, Unezici Zokuphepha kanye Nezilula.
Imodeli Ububanzi beblade(mm) Usayizi wegumbi(mm) umthamo(kg/h) Amandla(kw) Usayizi womshini(mm) Isisindo(kg)
Umshini wethu wokushibilika wensimbi we-SPJ Series uhlinzeka ngezingxenye zomshini womkhiqizo odumile, besisebenzisana nabaphakeli abaningi abadumile emhlabeni wonke, njenge-SIEMENS, NOK OMRON, SCHNEIDER, CHINT, MITSUBISHI njalonjalo iminyaka engaphezu kwe-10.
Sizosebenzisa ukupakishwa kwefilimu esongwe noma ukupakisha ngokhuni ukuvikela umshini wethu wokushibiliza wensimbi we-SPJ Series, sizokwenza isivikelo esihle somshini wethu wokushibilika wensimbi we-SPJ Series ngaphambi kokulayisha isitsha.
Buka umshini wokushicilela izinsimbi uyasebenza!
Okwedlule: Inombolo yemodeli: Umshini we-CBJ Series hydraulic scrap bale breaker umshini
Olandelayo: Inombolo Yemodeli: Umshini Wokulawula Wokukhiqiza WaseShayina Q43 Series Hydraulic Scrap Metal Alligator Shear Machine
umshini wokushibilika wensimbi
I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Pop-Top Can Baler Equipment, I-Y81 Hydraulic Baler, I-Scrap Metal Compactor, I-Leaf Compactor kanye ne-Baler,